Xaflad lagu soo xiray Tababbar loo qabtay Wariyaasha Radio Himilo. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 28, 2017	0 268 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xaflad kooban oo lagu soo xirayay tababbar soconayay muddo saddex maalmood ah ayaa lagu qabtay hoolka Idaacadda Himilo.
Tababbarkan oo wariyaasha Idaacadda Himilo lagu barayay diyaarinta iyo sameynta Radio Documentary, Radio Magazine iyo Newspaper Article waxaa bixinayay kaadirro ku gaaroobay cilmiga iyo mihnadda saxaafadda.
Ustaad Faarax Cumar Nuur oo ah madaxa tababarrada Ururka NUSOJ oo inta badan bixinayay mowduucyada ku hoos lifaaqan saddexda cinwaan ee ujeedka laga lahaa ayaa in badan ifiyay mugdi wariyaasha kaga jiray qeybahaas.
Sidoo kale, Ustaad Maxamud Maxamed Yuusuf oo ah suxufi ruug-cadaa iyo tifaf-tiraha Wargeyska Runta – ahna geyfane u ol’oleeya horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Siyaatal, dalka Maraykanka, wuxuu wariyaasha ku biiriyay waaya’aragnimadiisa xeesha dheer ee horumarinta iyo kobcinta heerka suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Ku kala shaqeynta gudaha dalka iyo dibaddiisa, Maxamud wuxuu bixiyay tilmaamo aad loogu baahnaa marka laga fikiriyo doorka is-beddelka iyo halka laga anba-qaadi karo.
Doodaha iyo aragtiyada kala duwan ee wariyaashu isla qaadaa-dhigayeen ayaa muujiyay sida ay kaga go’an tahay ficil u rogista tababbarka.
Intii ay haddaba socotay xafladda, maamulka Idaacadda Himilo oo goobta ka hadlay ayaa aad ugu mahad-naqay kaadirradii aqoontooda ku biiriyay wariyaasha xarunta ka howl-gala.
Dr. Mahdi Maxamed Abuukar, guddoomiyaha Radio Himilo ayaa ku sifeeyey tababbarkan mid wax badan ku kordhin doona tayada iyo khibradda wariyaasha – isaga oo fursaddan ku tilmaamay mid naadir ah oo ay mudan tahay in in badan looga mahad-naqo Ustaad Faarax.
Waa markii labaad oo tababbar gudaha idaacadda loogu qabto wariyaasha Himilo marka laga soo taggo kuwa ay wariyaasha banaanka u aadaan taniyo markii dhidibada loo aasay.
Sanadkii hore, sidan oo kale, waxay tababbar ku saabsan sida loo diyaariyo maqaallada, warbixin-goobeedyada iyo qoraallada aas’aaska ah u sameysay suxufiyiin loogu qabtay xarunta.
Qeyb kamid ah dadaallada ay Idaacaddu ku doonayso soo saarista barnaamijyo iyo warbixinno is-beddel ku horseedi kara bulshada, waa inay wariyaashu helaan aqoon is-weydaarsi iyo tababarro lagu horumarinayo mihnaddooda.
Taasina waa farriin iyo balan-qaad is-barbar socda oo qorshaha fog ee Idaacadda looga gol-leeyahay dib-u-dhiska wacyiga dadka ee la xiriira noloshooda maanta iyo hirashada danbe ee beritto.
Previous: Daladda ugu ballaaran adduunka oo laga sameeyey Magaalada Makka.
Next: Gorgor halis ku haya nolosha magaalo kamid ah Maraykanka.
La kulan: 10 jirka keligiis ku nool gurigii ay kaga dhinteen Waalidkiisa!